Mareykanka oo askar kala baxaya Yemen kadib markii loo hanjabay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maraykanka ayaa la sheegay inuu milaterigiisa kala baxayo saldhig ku yaalla Yemen, sababo la xiriira nabadgelyo darro aaggaas ku sii korortay.
Ciidanka oo ay ku jiraan askarta gaarka ah ee kumaandoska ayaa la sheegay in laga saari doono saldhigga Al-canad ee ku yaalla koofurta Yemen.
Waxaa la rumaysan yahay in saldhigga Al-canad loo isticmaali lahaa in lagu tababaro askarta xukuumadda Yemen, dagaalka ay kaga hor jeedaan Al-Qaacida ee koofurta dalka.
Milateriga Maraykanka weli wax faallo ah kama bixin wararka sheegaya inay ciidankooda xeradaas kala baxayaan.
Dhanka wasaaradda difaaca Mareykanaka ayaa xaqiijisay in askrta saldhigaas laga raray ay hanjabaad uga timid Khalaafada Islaamiga, kuwaasoo 130 qof oo Shiico jimcihii ku dilay labo masjid oo ku yaallada magaalada caasimadda ah ee Sanca.
Magacyada, sawirada iyo cinwaanada dadkan ayaa la soo dhigay bar internet oo xiriir la leh Daacish, waxaana loogu baaqayay taageerayaasha Daacish ee ku sugan mareykanka inay dilaan dadkaas oo isugu jira ragg iyo dumar.
Taliye cusub oo loo magacaabay milateriga ka howlgala Banaadir & labada Shabeelle